Diana ရဲ့ Aquamarine လက်စွပ်ကို မင်္ဂလာပွဲမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Meghan Markle – FemaleWear.net
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရိုက်ခက်သွားခဲ့တဲ့ Prince Harry နဲ့ အမေရိကန်သရုပ်ဆောင် Meghan Markle တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို မေလ ၁၉ရက်နေ့မှာ ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့ပြီး အနုပညာရှင်များစွာနဲ့ တော်ဝင်မိသားစုများစွာလည်း တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကလည်း မလှမ်းမကမ်းကနေ လာရောက်အားပေးနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Meghan ရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံကတော့ မင်္ဂလာပွဲရဲ့ လူစိတ်အဝင်စားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး Wedding look နဲ့ Party look နှစ်စုံကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမ Wedding Dress ကိုတော့ Givenchy ရဲ့ ဗြိတိန်ဒီဇိုင်နာ Clare Waight Keller ကဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး ဒုတိယ Party Look ကိုတော့ Stella McCartney ကချုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေကြားမှာ တော်ဝင်ဆန်ဆန်တင့်တယ်နေတဲ့ သူမရဲ့အလှကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အံ့အားသင့်လောက်တဲ့ အထိကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Prince Harry နဲ့ Meghan Markle တို့စုံတွဲကတော့ Royal Wedding ကို ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့ ၁၆ ယောက်မြောက်စုံတွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Harry and Meghan giving us major 007 vibes as they head off to their evening reception in an icy blue Jaguar. ??And do we spy Princess Diana’s aquamarine ring on her finger? ?? #royalwedding #meghanmarkle #princeharry
A post shared by TOWN&COUNTRY (@townandcountrymag) on May 19, 2018 at 12:03pm PDT
ညနေပိုင်း Party Look မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Aquamarine လက်စွပ်ကိုတော့ Prince Harry ရဲ့ မိခင် Princess Diana ဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လက်စွပ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်စွပ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကတော့ Aquamarine ဆိုတဲ့အတိုင်း ကြည်ပြာရောင်ကျောက်တစ်လုံးတည်းရဲ့ အလှကို ပေါ်လွင်အောင် မြကွက်ပုံစံ cutting နဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။ Kate တုန်းကလည်း Diana ဝတ်ဆင်ဖူးခဲ့တဲ့ tanzanite လည်ဆွဲကို ဝတ်ဆင်ဖူးပါသေးတယ်။ ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကို သုံသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Diana စုဆောင်းခဲ့တဲ့ ရတနာတွေက ချွေးမတွေအတွက်လို့ ဆိုကြပြီး Diana ရဲ့ ရတနာတွေအာလုံးကို သားတွေဆီမှာ ပေးထားတာဘဲဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်ကြပြန်ပါတယ်။ Diana ရဲ့ အလှနဲ့ သူမရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကတော့ လူတွေအမြင်မှာ ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားဘဲ သားစဉ်မြေးဆက်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ဒီဇိုင်းတွေအဖြစ်မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Meghan Markle’s second wedding dress,abespoke Stella McCartney gown, also includedachange in accessories, with the Duchess of Sussex debutinganew gift from her husband, an aquamarine cocktail ring that once belonged to Princess Diana ? Getty Images
A post shared by Vogue Brides Australia (@voguebridesaustralia) on May 19, 2018 at 9:55pm PDT
Tags: Prince Harry and Meghan Markle, Royal Wedding, Wedding Dress